ငါရုပ်ရှင်၏ဘုရင်နှင့်အတူတင်ပို့ခံရ! - Webtoon Korean Manhwa - Manhua - Manga နှင့် Light Novel Online ကိုအခမဲ့ဖတ်ပါ
ငါရုပ်ရှင်၏ဘုရင်နှင့်အတူတင်ပို့ခံရ! ပျမ်းမျှ 4.3 /5ထဲက 6
ပြဇါတ်, ဒရာမာ, စိတ်ကူးစိတ်ကမ်း, စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း
Whaaa?! နတ်ဆိုးစီမံခန့်ခွဲမှုကကျွန်တော့်ကိုယောက်ျားထပ်ထပ်ပေးလိုက်တာလား?! ဒီတစ်ခါတော့ယောက်ျားလေးဟာဘုရားဘုရားပဲ။ OMG ~ ငါမကြာသေးခင်ကမှရင့်ကျက်တဲ့မြေခွေးလေးပါ။ ငါ့အားဤသို့သောနတ်ဆိုးဟောင်းကိုစီစဉ်ခြင်း၊ ငါဘာလုပ်ရမည်နည်း
ဘယ်မှာစာဖတ်ရမလဲမသိဘူးဆိုရင် manhwa ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ပါ။ များစွာသောအပူဆုံး manhwas များကိုနေ့စဉ်ဤကဲ့သို့သော update လုပ်သည် manhwa 18, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ manhwa, တစ်ကိုယ်တော် leveling manhwa, manhwa manga, manhwa အဓိပ္ပာယ်, အ gamer manhwa, ကိုရီးယား manhwa, မိဖုရားပျား manhwa, manhwa ကိုဖတ်ပါ, အနိုင်အထက် manhwa, ပြီးပြည့်စုံသော manhwa, manhwa နှင့် manga, နာကျင်စေသောဆေး manhwa, အကောင်းဆုံး manhwa, အသံတိတ်စစ် manhwa, manhwa raw, ငါ့ကိုပြောပါ manhwa ချိုမြိန်ကောင် manhwa ချိုမြိန်အိမ် manhwa, manhwa ရုပ်ပြ, ငါ့ stepmom manhwa, အွန်လိုင်း manhwa အွန်လိုင်း, bastard manhwa, manhwa သွေး link ကို, manhwa, yaoi manhwa, သွေးဘဏ် manhwa, manhwa, lookism manhwa, ငါတို့အကြောင်းကိုတစ်ခုခု manhwa, အမျိုးသမီးကလေး manhwa, bl manhwa, ငါ့ကို manhwa ကယ်တင်, စုန်းမမုဆိုး manhwa, ဘုရား manhwa မျှော်စင်, ဆိုင်းဘုတ် manhwa, manhwa နှင့်အဓိပ္ပါယ်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ထင်ယောင်ထင်မှား manhwa, manhwa bl, ငါ့အဒေါ် manhwa, အချစ်ဇာတ်လမ်း manhwa, yuri manhwa, အခွင့်အလမ်း manhwa ။
အခန်းကြီး 55 ဧပြီလ 18, 2021
အခန်းကြီး 54 ဧပြီလ 14, 2021
အခန်းကြီး 53 ဧပြီလ 12, 2021
အခန်းကြီး 50 ဧပြီလ 2, 2021
အခန်းကြီး 49 မတ်လ 30, 2021
အခန်းကြီး 48 မတ်လ 28, 2021
အခန်းကြီး 46 မတ်လ 21, 2021
အခန်းကြီး 45 မတ်လ 17, 2021
အခန်းကြီး 44 မတ်လ 14, 2021
အခန်းကြီး 43 မတ်လ 8, 2021
အခန်းကြီး 42 မတ်လ 8, 2021
အခန်းကြီး 40 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2021
အခန်းကြီး 39 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2021
အခန်းကြီး 37 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2021
အခန်းကြီး 36 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2021
အခန်းကြီး 35 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2021
အခန်းကြီး 34 ဇန်နဝါရီလ 26, 2021
အခန်းကြီး 33 ဇန်နဝါရီလ 19, 2021
အခန်းကြီး 32 ဇန်နဝါရီလ 19, 2021
အခန်းကြီး 31 ဇန်နဝါရီလ 12, 2021
အခန်းကြီး 30 ဇန်နဝါရီလ 12, 2021
အခန်းကြီး 29 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 28 ဇန်နဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 27 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 26 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 25 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
အခန်းကြီး 24 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 23 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 22 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 21 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 20 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 19 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 18 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 17 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 16 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 15 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 14 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 13 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 12 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 11 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 10 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး9ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 8 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး7ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး6ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး5ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး4ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး3ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး2ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး 1 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
အခန်းကြီး0ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2020
ဒီ Boy ငါ့ကိုခဲယဉ်းကျဆင်းလာတယ်